Blackphone2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: privacy doesn't have to come at the cost of usability - သတင်း Rule
Blackphone2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: privacy ကိုအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာလာရန်ရှိသည်ပါဘူး
ဒါဟာအများဆုံးအဆင့်မြင့်တာမဟုတ်ပါဘူး, သူ့ရဲ့ကင်မရာအား နည်း. နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းလွင်ပြင်အစားဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ software နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်ဘယ်လောက် useable အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Blackphone2Android ရဲ့အကောင်းဆုံး bits သည်စောင့်ရှောက်နှင့် privacy-orientated န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပြုပါကဲ့သို့သင်တို့အလမ်းအတွက်ရပါဘူး.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Blackphone2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: privacy ကိုအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာလာရန်ရှိသည်ပါဘူး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
မရိုးသားတဲ့ apps များနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီခြေရာခံခြင်းတစ်ကမ်ဘာတှငျ, အ Blackphone2သင့်ရဲ့လမ်းအတွက်ရတဲ့မပါဘဲပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့ကတိပေးထား.
လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကုမ္ပဏီအသံတိတ်စက်ဝိုင်းအားဖြင့် Blackphone ၏ဒုတိယထုတ်ဝေအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အတွက်ခြေလှမ်းတက်သည်နှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို set up ဖို့လွယ်ကူပြီးအသုံးဖြစ်ပါသည်, ပင်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောများအတွက်.
အဘယ်အရာကိုမျှ unhackable ဖြစ်ပါသည်, ဟုတ်ပါတယ်, ထိုသို့တိုက်ခိုက်ရန်ခဲ့ပုံကိုဒဏ်ခံစမ်းသပ်ဤအဆင့်မှာဖြစ်နိုင်ခြေမဟုတ်ခဲ့.
အဆိုပါငွေကို "S 'အ Blackphone အထူးတစ်ခုခုကြောင်းတည်းသောအမှတ်အသားအကြောင်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Blackphone2ရဲ့ monolithic စတိုင်က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အကိုက်ညီဆုံး. ပြင်ပကနေတစ်ဦးကိုကောင်းစွာထား-အတူတူယေဘုယျအနက်ရောင်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါတူ. တပ်ဦးနှင့်နောက်ကျောဖန်များမှာ, နှစ်ဖက်စလုံးပလပ်စတစ်ဝိုင်း.
ဒါကြောင့်ပဲအချို့သောယေဘုယျ device ကိုမဟုတျကွောငျးကိုသာအရိပ်အမြွက်မီးခိုးရောင်-on-အနက်ရောင်စာလုံးအတွက်စကား "blackphone" နှင့် "ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိက" နဲ့နောက်ကျောအပေါ်ငယ်လေးတစ်အနိုင်နိုင်မြင်နိုင်အသံတိတ်စက်ဝိုင်းလိုဂိုဖြစ်ပါသည်.
ကျင်းပရန်အတော်လေးအဆင်ပြေဒါဟာင်, နှင့်အခြားဖန်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ချောမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးသံလိုက်နဲ့တူလက်ဗွေရာကိုယူလိုက်တယ်. အဆိုပါ 5.5in 1080p LCD မျက်နှာပြင်ဖြစ်နိုင်သလိုတောက်တောက်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ OnePlus အတွက်အသုံးပြုကြောင်းဆင်တူအရည်အသွေးသည် 2, ဥပမာအားဖြင့်, ဒါပေမဲ့မအတော်လေးအမှတပ်ဆင်ကြောင်းနှင့်အတူတစ်တန်းတူအပေါ် ကို Nexus 6P သို့မဟုတ် Galaxy S6 Edge +.
အဆိုပါဖုန်းကို 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူ, အရာဒီနေ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ပျမ်းမျှအားအကြောင်းကြောင်းနှင့်ကောင်းစွာတည်ဆောက်ခံစား. ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ကိုဖိအားအောက်တွင်အနည်းငယ် flexes, သောကကျောအိတ်ကပ်ထဲမှာထည့်ပြီးထိုင်ဖို့မဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးင်ဆိုလိုသည်.
Screen ကို: 5.51080p LCD ကိုအတွက် (518ppi)
သိုလှောင်ခြင်း: 32GB ကို; microSD card slot
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: အသံတိတ် OS ကို2Android ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ 5.1.1
ကင်မရာကို: 13လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 5အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, Bluetooth နဲ့ GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 152.4 x က 76.4 x က 7.9mm ကိုယ်ထည်
အောက်ခြေရှိတစ်ဦးကစံ microUSB slot ပါ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Blackphone2Qualcomm ၏လယ်ပိုင်းအကွာအဝေးတွင် Snapdragon ရှိပါတယ် 615 Processor ​​ကို, ဖုန်းရဲ့ရည်ရွယ်ပရိသတ်အတွက်ဆက်ဆက်လုံလောက်အစွမ်းထက်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ snappy ခံစားခဲ့, ပြဿနာတစ်ခုမပါဘဲအခမဲ့နှင့် multitasking ကိုတဆင့်ဝါးအဲလိုဘဲ.
သာသူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းကစားရန်ကြိုးစားနေသောသူတို့အားရုန်းကန်စေခြင်းငှါ, ငါမသေချာဘူးပြီးနောက်သင်နေကားအဘယ်သို့လျှင်မူကားသင်တစ်ဦး Blackphone စဉ်းစားနေတာပါအဘယ်ကြောင့်.
ငါက Wi-Fi ကိုဧည့်ခံကြောင့်ဖြစ်ရပြီနိုင်သကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ, အလားတူထုတ်ကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဒါပေမယ့် 4G ဧည့်ခံမြတ်သောခဲ့သည်, ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးဖြစ်သကဲ့သို့.
အဆိုပါစမတ်ဖုန်းရုံအောက်မှာကြာ 24 တာဝန်ခံတစ်ဦးလျှင်နာရီ, တွန်းအားပေးအီးမေးလ်များနှင့်အသိပေးချက်များကို၏ဖြစ်နိုင်သလိုလေးလံသောအသုံးပြုခြင်းနှင့်စာရေးနှင့်အတူ. သငျသညျတစျနေ့တစျကွိမျကအားသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင်ညဉ့်အဘို့အထွက်သွားလျှင်ပင်အိမ်ပြန်ရတိုင်အောင်ကြည့်ရှုသင့်ပါ.
ယေဘုယျအား, သငျသညျမှာ "လုံလုံခြုံခြုံ" ဖုန်းကိုဝယ်ယူ၏နာမ၌ဘာမှလျော့မယ့်ကဲ့သို့သင်တို့မခံစားရဘူး.
တဦးတည်းစက်ပစ္စည်းတွင် Google နှင့်အသံတိတ်ဖုန်း, သငျသညျခငျြအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကအဖြစ်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ option နဲ့အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ငြိမ်ဝပ်စွာနေစက်ဝိုင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာအသံတိတ် OS ကိုတညျဆောကျ Google ရဲ့ Android 5.1.1 Lollipop, အရာသာရုံဖြင့်အစားထိုးခဲ့ ဗားရှင်း6Marshmallow.
စိတ်ဝင်စားစရာ Boot တက်ကာတွန်း ကျော်လွန်., ဒါကြောင့်စတော့ရှယ်ယာကို Android နဲ့တူလှပါတယ်နှင့်ပြုမူ. သင်တို့သည်နောက်ကိုမှန်ကန်န့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ Third-party apps များ download လုပ်ဖို့အားလုံးကိုကို Google apps များနှင့် Play Store ကိုသုံးခွင့်ရှိသည်.
အမကျွမ်းကျင်သူတွေပဲမျက်စိမှတကယ်မြင်နိုင်တစ်ခုတည်းသောဖြည့်စွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးစင်တာအိုင်ကွန်တွေဟာ, အအသံတိတ် Store နဲ့အသံတိတ်ဖုန်း app များ, အန်းဒရွိုက်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူသည်အဘယ်သူကိုမျှအဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးအရာအိမ်မှာလက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါစတော့ရှယ်ယာကို Android-သိသာမျက်နှာဖုံးများဖုန်းသို့ built လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကို၏လြှို့ဝှကျအလွှာ.
အဆိုပါလုံခြုံရေးစင်တာ app ကိုကတဆင့်သုံးစွဲသူလမ်းလျှောက်, ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင် app များကိုရယူနိုငျသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမသာကျော် granular ထိန်းချုပ်မှုများ, ဒါပေမယ့်လည်းဖုန်းဖြင့်ပေးထားသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ.
app တစ်ခုတည်နေရာဒေတာသို့မဟုတ်အင်တာနက် access ကိုရှိခြင်းချင်မနေပါနဲ့? ပြဿနာမရှိပါဘူး. ဒါဟာအတွက် Google ကအကောင်အထည်ဖော်အသစ်ခွင့်ပြုချက်စနစ်အလားတူထုံးစံ၌လည်ပတ် Marshmallow နှင့် Cyanogen OS ကိုအားဖြင့်နာမည်ကြီးလုပ်.
အဆိုပါလုံခြုံရေးစင်တာ app ကို privacy နဲ့လုံခြုံရေး options အားဖြင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်. သင်ပင်တစ်ဦးက Google-အခမဲ့အာကာသသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါနှုန်း-app ကိုထိန်းချုပ်တစ်ဦးတည်းသာအဆငျ့ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Blackphone2ဒါကြောင့် "ကွက်လပ်" ခေါ်ဆိုသောအရာကိုရှိပါတယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုအာကာသကန့်သတ်မယ့်စနစ်ဟာအဆင့်တွင်စေနိုငျသောအတွင်းသီးခြားအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏. တစ်ခုချင်းစီကိုအာကာသအခြားစကားပြောမနိုင်, သငျသညျအထဲတွင်သွင်းထားသောအရာကိုသေချာထဲတွင်ရှိနေမည်. သငျသညျရှိနိုင်ပါသည်, ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့အလုပ်အီးမေးလ်ကိုတစ်ဦးအာကာသ, အဆက်အသွယ်, ပြက္ခဒိန်နှင့်ဖုန်းရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းမှပယ်ခိုင်ခံ့သောကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများ.
သင်တစ်ဦး app ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဒါပေမယ့်သင်ကအန္တရာယ်များဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, ကကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှုအရာကြိုးစားကြည့်ပါပြုတတ်လျှင်သင့်ရဲ့ဒေတာ၏ကျန်မှအထီးကျန်င်ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးကဆင်းသော့ခတ်အာကာသအတွင်းကထည့်ထားနိုင်ပါတယ်.
အသီးအသီးအာကာသမှရယူခြင်းရိုးရှင်း. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသော codes တွေကိုနှင့်အတူဖြောင့် lockscreen မှနေရာများသို့ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာအရိပ်ထဲမှာ switcher ကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်စေ. သငျသညျအသီးအသီးအာကာသပေးလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်, တဦးတည်းသီးခြားတစ်တက်ကြွအခါသည်အခြားအာကာသ lockdown နိုင်စွမ်းအပါအဝင်.
ကုမ္ပဏီများအာကာသသတ်မှတ်နှင့် ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်, သောဆိုလိုသည်သင်သည်ဒေတာလုံခြုံရေးမထိခိုက်စေဘဲတူညီသောဖုန်းပေါ်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အလုပ်ရောနှောနေခြင်းနိုင်. အများအပြားကအခြား devices များ, ဘလက်ဘယ်ရီအပါအဝင်အလားတူတစ်ခုခုလုပ်နိုင်.
အပိုလုံခြုံရေးများအတွက် lockscreen အပေါ် pin ကို pad ပါ Randomise. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တိုင်း setting ကိုနှင့် configuration ရှုပ်ထွေးတဲ့အသံ, ဒါပေမယ့်လုံခြုံရေးစင်တာကတဆင့်သုံးစွဲသူတွေကိုပဲ့ပြင်နိုင်. လုံလောက်တဲ့သည်းခံခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အတွင်းအရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်နိုင် 30 မိနစ်.
ဒါဟာသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရမ်းအဖြစ်ဖုန်းအဖြစ်လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့အဖြစ်ခက်ခဲစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်. သင်က lockscreen အပေါ် pin ကို pad ပါ randomise နိုင်, သောသင်ပတ်စ်ကုတ်မှာသင့်ရဲ့ပခုံးကိုကျော် Snoop မှတစ်စုံတစ်ဦးကြောင့်အများကြီးပိုခက်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာခက်ခဲဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကို.
သတိပြုရကျိုးနပ်အခြားအမှုအရာတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုချွတ်ပယ်အော်တိုခလုတ်များမှာ, ခြောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်စေရန်အသံတိတ်စက်ဝိုင်းမှတိုက်ရိုက် operating system ကိုမှလျင်မြန်စွာမွမ်းမံမှုများ၏ဂတိ, ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ်ကြောင်းနှင့် device ကိုစာဝှက်စနစ်.
The Silent Store contains apps vetted by Silent Circle, but they are few and far between. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The camera isn’t anything to write home about, but will do for snapping pictures of documents or your cat. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Blackphone2is available for £659 withoutamobile phone contract in the UK, but including 100 minutes of Silent Phone subscription forayear.
နှိုင်းယှဉ်, BlackBerry’s Priv Android phone costs £559 and offers similar work-private life segregation.
အဆိုပါ Blackphone2promises to be the most secure Android smartphone available.
အကောင်းအဆိုး: security without an overburden of difficulty, spaces, normal Android experience, encrypted phone calls, snappy စွမ်းဆောင်ရည်ကို, promise of rapid security updates
Cons: bland design, weak cameras, စျေးကြီး, weaker than expected Wi-Fi connectivity
Google Nexus 6P ပြန်လည်သုံးသပ်: ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Phablet ကို
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သီးသန့်လုံခြုံရေး, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း (2015) [VIDEO] အမေဇုံ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သုံးသပ် →